Ukunciphisa amapheya ekwindla
KwiNdlu I zityalo
Kwi-gardening pruning tree fruit is given indima ebalulekileyo, kuba ukunakekelwa ngexesha kunye nokufanelekileyo kukuvumela ukuba ukwandise isivuno kunye nomgangatho wezityalo. Ukususwa kwamasebe angafunekiyo kukhokelela ekubeni isityalo sibhetele kangangoko sinikezelwe ngomoya ofanelekileyo kunye nokukhanya. Ukuba uye wazibuza ukuba kufuneka udibanise ipaare ekuwa, siya kuzama ukuphendula ngokubanzi.
Amaxesha okuvunwa kwamapare
Ixesha, xa unokuluhlula ipeyari, akuza kanye kuphela ngonyaka. Ngokuqhelekileyo, imithi yamapare iyakutywa entwasahlobo, xa iqhwa liye laphela, kwaye izityalo azikaqalanga. Ukusika izihlahla zentsundu kuhloswe ukukhupha amasebe ahluphekileyo ebusika, aya kuthintela amahlumela amancinci ekuphuhliseni. Ukunciphisa ipeyari ekwindla kuyindawo ebalulekileyo yobongikazi, kuba phambi kwexesha elibandayo umthi kufuneka ube nezondlo, kwaye amasebe angenakwenzekayo athatha inxalenye yamandla, okwenza i-pear ibe yingozi. Umbuzo wendlela yokunciphisa ipeyari ekwindla ibaluleke kakhulu kumabanga okuqala kunye naphakathi kwesi sityalo. Ngokuqhelekileyo inkqubo yonke iyaqhutywa ukususela ngoSeptemba ukuya kwiqhwa kuqala. Ezinye iingcali zithi ziyakwazi ukunciphisa ipeyari ebusika, kuba ngexesha loxolo olunzulu umthi awunakonakaliswa, kodwa kuyingozi kakhulu ukuyenza kwiqhwala ezinzima.
Ukuqulunqa nokuvuselela iipereyiti zokusika
Naluphi na ukutyala komthi kunobonakaliso obucacileyo. Ukuba i-pruning elula kunye nokubunjwa kwamaparele kwenziwa rhoqo ngonyaka, ngoko ke ukuvuselela izihlahla ziyimfuneko kuphela kwimithi endala ephakathi kweminyaka eyi-10. Ukwenza izihlahla ziyakunceda ukuba ulahleke amagatsha amabi nawagulayo ngexesha elifanelekileyo, kunye nokukhusela ukukhula kwepeari phezulu, ukuze kube lula ukuvuna. Ubukhulu besikhewu sonyaka buhambelana ngqo namabakala amapheya, akhula kakhulu, aphakathi kweminyaka kunye nobuthakathaka. Ukuhlaziywa kwezihluma kwenziwa kuphela xa umgangatho wesityalo uyancitshiswa kakhulu, kwaye kungekhona nje umthi ufikelele kwiminyaka eyi-10.
Imithetho yokuqoqa iipare
Ukutyala ngokufanelekileyo kwepeyari kudinga ulwazi oluninzi kunye nomgudu, njengoko ukungazi kungaholela kwimonakalo embi kwimithi. Ngaphambi kokuba uqale, funda indlela yokunquma kakuhle ipeyari ekuwa.
Awukwazi ukuwunqumla umthi ngexesha elinye, njengoko usebenze yonke imikhosi yokubuyiselwa okukhawulezayo kwaye uza kukhupha amahlumela amaninzi angaphezu konyaka okanye amabini aya kufumana ukuphakama kwangaphambili. Kungcono ukwahlula inkqubo yonke kwiinqanaba ezimbini - ukunqumla inxaxheba ngoku, kunye nabanye ukusika kuphela ngonyaka ozayo.
Okokuqala, ukukhula okuvela kwi-trunk kwi-angle ekhangelekileyo kususwe. Emva koko ususe i-vertical, efana ne-trunk.
Ukususwa kwamasebe kubalulekile ukuba ungagqithiseli, kodwa ungashiyi i-stumps. Ikhonkco yenkcazelo kufuneka isebenze njengetyhula ye-bark, ebonakala ngokucacileyo kwisiseko sebebe. Kukho apho kukho izicubu ezinokuphulukisa nokulungisa umthi ngokukhawuleza. Ukuba ushiya isiqu esichukumisayo okanye wenze isinqununu esincinci, isilonda kuya kuba nzima kwaye kudala ukugqithisa.
Inkqubo yokusika amagatsha angaphezu kwe-3 cm kufuneka ibe yile ilandelayo - okokuqala isikhonkwane senziwe ngezantsi, kwaye sele sele sikwazi ukusibona phezulu. Ngaphandle koko, igxolo phantsi kwegatyala lingonakaliswa, xa kungagqibekanga ngokupheleleyo isebe liya kuphula phantsi kobunzima bayo.
Emva kokucima iipereyithi, iisayithi zokuhlamba kufuneka zenziwe ngokukhawuleza kunye ne- garden crock okanye enye ikhambi elilodwa. Ngaphandle koko, umthi uya kuqala "ukukhala", ugxininise ijusi, kwaye oku kuya kukhwela izinambuzane ezinobungozi kunye nokunciphisa umthi.
Emva kokusika izilwanyana, awufanele ukondla, njengoko umthi ngokwawo uza kuqala ukuphucula ngamandla, ukudonsa ubuninzi bezondlo kwizityalo.
Indlela yokucoca i-gooseberries entwasahlobo-iingcebiso kunye namaqhinga aqalayo
Hydrangea ingadi - ukutyala nokunyamekela
Flower murai - njani ukunyamekela?
URogersia - ukufika nokunyamekela
Ukutyala kwe-apricot entwasahlobo
I-Apple ihluma - ukulwa nayo
Indlela yokutyala iirasi ekuwa?
Indlela yokukhulisa ithanga kumbewu?
Ukutshintshwa kweFicus ekhaya
I-Rhododendron - ukutyala nokunyamekela kwindawo evulekile
ITui Smarag - ukufika nokunyamekela
Ukugonywa kwisifo sofuba kubalulekile ulwazi kubazali
I knot yaseGordian - yintoni edibanisa "ingqungquthela yaseGordian" nendlela yokuyinquma?
Ungaqala njani ukulahlekelwa isisindo kakuhle ekhaya?
Indlela yokutya: indlela yokuziphatha kakuhle ngokutya?
UGinnifer Goodwin wamnika uYoshuwa Dallas unyana wesibini
Indlela yokumisela ukukhulelwa kwe-ectopic ngexesha elifutshane?
Inkukhu kunye neetamatati kunye noshi ehovini
Ubomi bomntu kaSarah Gadon
I-Gymnastics emva kokubeletha ukulahleka kwesisindo
Izitayela zeenwele eziphathekayo Ehlobo 2013
Izifo zesikhumba sePustular
Iingcango zokungena kwizindlu zelizwe
Yiyiphi ixesha elide elilindele ixesha elide elilindelwe "leMidlalo yeTrone"?
Indlela yokuhlambulula isibindi se-toxins kunye ne-toxins?
Iindawo ezinika umdla zotyelelo e San Pedro
Grechany nge inyama enobisi - iresiphi
Ukufakela ngokushicilelwa kwesithombe
I-sweet crispy hlama emhlophe